माअोवादी केन्द्रको भागमा पर्यो काठमाण्डाै निर्वाचन क्षेत्र नं. १० - Chandragiri News
Home निर्वाचन माअोवादी केन्द्रको भागमा पर्यो काठमाण्डाै निर्वाचन क्षेत्र नं. १०
माअोवादी केन्द्रको भागमा पर्यो काठमाण्डाै निर्वाचन क्षेत्र नं. १०
२०७४, २६ आश्विन बिहीबार १०:१९
आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वाम गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा भागबन्डा टुंगिएको छ । जसअनुसार एमालेले आफूलाई सात र माओवादीलाई तीनवटा क्षेत्र दिएको छ ।
एमालेले काठमाडौंका २, ३, ४, ५, ७, ८ र ९ निर्वाचन क्षेत्र आफूसँग राखेको छ । माओवादी केन्द्रलाई भने १, ६ र १० निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएको छ । काठमाडौं १ मा कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह उठ्दैछन् । उनी दुईवटै संविधानसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी दलभन्दा दोब्बर मतले विजयी भएका थिए । विवेकशील साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्र उठ्दैछन् यही निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्ने यसअघिनै तय भइसकेको छ ।
काठमाडौं ६ मा यसपटक पनि कांग्रेसले भीमसेनदास प्रधानलाई उम्मेदवार बनाउँदैछ । यसपटक प्रधानसँग माओवादी केन्द्रका हिमाल शर्माले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । सो क्षेत्रबाट दुईचोटि एमाले नेता योगेश भट्टराई पराजित भएका थिए ।
Previous articleकिर्तिपुरको अाकाशमा हरेक दिन बेलुन उडाइँदै !
Next articleचन्द्रागिरि गोल्डकप फुटबल हुँदै, विजेतालार्इ नगद रू ५ लाख